MID : Mpizaika frantsay sy gasy 450 hivory momba ny fitsinjaram-pahefana -
AccueilRaharaham-pirenenaMID : Mpizaika frantsay sy gasy 450 hivory momba ny fitsinjaram-pahefana
02/03/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Hotanterahina amin’ny faha- 05 sy ny faha-6 ary ny faha-07 ny volana marsa 2018 etsy amin’ny Carlton Anosy ny andiany faharoa amin’ny “AICT”, na ny “Assises de la Coopération Internationale des Collectivités Malagasy et Françaises”, izay efa natao teto tamin’ny taona 2006 ny andiany voalohany. Ny eo anivon’ny MID, na ny Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation na minisiteran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana moa no isan’ireo mpikarakara ity hetsika ity.
Lehibe amin’izany ny fikarakaran’ny minisiteran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana ilay fanazavana mikasika ny votoatin’ity fivoriambe ity, izay natao teny amin’ny Primature Mahazoarivo ny alarobia hariva teo. Nitondra famelabelaran-kevitra tamin’izany moa ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Henry Rabary Njaka, ny sekreteram-panjakana miadidy ny Fiaraha-miasa sy ny Fampandrosoana eo anivon’ny MAE Bary Rafatrolaza, ary ny Sekretera Mpanatanteraky ny Komity mpanomana an’ity AICT Roger Mahazoasy.
Mpizaika 450 no andrasana amin’izany, ka ny 177 amin’ireo dia mpandray anjara teratany Malagasy, ary ny 237 kosa dia mpandray anjara Frantsay. Nandritra ity famelabelarana teny Mahazoarivo ity dia nanamafy ny maha zava-dehibe an’ilay andiany voalohany andriamatoa Roger Mahazoasy, satria samy nahatsapa ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana fa nahazo tombontsoa tamin’io “Assise AICT” io. Tamin’ny fandraisam-pitenena nataon’ny minisitry ny Raharaham-bahiny Henry Rabary Njaka koa dia nanamafy izy fa “kihon-dalana iray ahafahan’ireo mpandraharaha malagasy mampandroso an’i Madagasikara io”.
Ny sehatry ny Tanora, ny mikasika ny fitantanana ny loza ara-boajanahary , ny Fampandrosoana eny ifotony, ary ny fikojakojana ny rano sy ny fidiovana no isan’ny teboka lehibe hodinihina mandritra io Assise mandritra ny 3 andro io. Vokatra andrasana kosa ny fahazoan’ireo mpizaika fifanakalozana traikefa ka hipaka any amin’ny fampandrosoana ifotony.